Madaxweynaha dowladda Puntland, Saciid Cabdulaahi Deni
GAROWE, Puntland – Dowladda Puntland oo markii ugu horeysay ka hadashay dhacdadii lagu dilay sideeda ruux - todoba dhakhtar iyo qof shacab ahaa – ayaa tacsi u dirtay ehelkooda, asxaabtooda iyo qaraabadooda.
Dil wadareedkan kooxo hubeysan oo heybtooda aan la aqoon ka geysteen degaanka Gololey waxaa haatan baaritaan kuwada guddi uu magacaabay madaxweynaha HirShabelle, Maxamed Cabdi Waare.
Madaxweynaha dowladda Puntland, Saciid Cabdulaahi Deni, ayaa ku baaqay in baaritaanka uu noqdo mid dhab ah isla markaana lagu soo gabagabeeyo sidda ugu dhaqsiyaha badan isla markaana ugu macquulsan.
"Waxaan kaloo dowladda HirShabelle iyo dowladda federaalka ah oo ka akdhow iyagana ku biirinayaa dedaalka ay wadaan oo ah baaritaan dhab ah in lasoo gabagabeeyo dhagar-qabayaasha falkaas geystay oo tuhun uu ku jiro sidda ay yihiin in la caddeeyo, runtii cadow weye noocuu doono ha ahaado laakiin in la caddeeyo waa muhiim," ayuu ku yiri hadal-jeedintiisa Maalinta la hadalka dadweynaha Puntland oo xalay uu jeediyay.
Wuxuu ku daray: "Tuhunka mararka qaarkii, dad badan oo wax-garad iyo siyaasiyiin ah oo hadlaayey baan arkay oo shaki badan uu ku jiro. Shakiga mararka qaarkood hadii aanan jawaab laga bixin wuxuu abuuraa wax aan wanaagsaneyn. Marka waxaan ka codsanayaa madaxda dowladda in marka ay waxyaabahaas oo kale dhacaan ay bulshadda la hadlaan".
"Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa la rabaa in ay bulshadda la hadlaan, in ay dejiyaan, in aysan u muuqan degaankaas iyo dadkii deganaa arrin uu shaki ka galo," ayuu ka dhawaajiyey, isagoo rajo ka muujiyey.
Warar horudhac ah oo laga helay baaritaanka ayaa qeexaya in dableyda ay wateen dareeska ciidamadda, balse ay wejiga qarsadeen. HirShabelle waxay ku adkeystay "dharka ciidanka qof walba ayaa heli karo".
Taliska Ciidamadda Soomaaliya ayaa dhinac isaga leexiyey eedeymo ka yimid dadka degaanka oo sheegayey in ay iyagu geysteen.
Saraakiil ciidan oo u waramay warsidaha Garowe Online ayaa tuhunsan in ay Al-Shabaab ka dambeysay falkaas. "Sidaas waxaan u leeyahay, waxaa soo hagaagay xiriirka shacabka iyo shacabka," ayuu yiri midkood.
Tuuladda Gololey oo hoostagta degmada Balcad ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa qaraxyo lagula eegtay ciidamadda xoogga dalka, kuwa AMISOM iyo mas'uuliyiin HirShabelle, kuwaas oo dil iyo dhaawacyo lagu gaarsiiyey.
Safarka Madaxweynaha ayaa dhaliyay hadal-heyn maadaama uu kusoo beegmay xilli...
Sidda hidda-sidaha DNA loogu kala saarey caruur leysku haystay
Puntland 15.02.2020. 21:20
Daacish oo sheegatay dilka gudoomiyihii hore ee Qandala
Puntland 22.01.2020. 16:03
Guddiga Xirfadlayaasha Caafimaadka ee dowlada Puntland oo la daah-furay
Puntland 19.01.2020. 12:38
Imaaraadka oo Deeq gaarsiiyay Puntland
Puntland 01.07.2018. 23:53
Ciidamo taabacsan Puntland oo howlgal ka fuliyay Laascaanood
Puntland 28.06.2018. 14:27
Deni oo magacaabay Taliyaha qaybta Booliska Gobolka Sool
Puntland 11.01.2020. 19:12
DF oo lagu eedeeyay in ay riixeyso "dacwad been ah" kana dhan ah wariye 07.07.2020. 18:50